Alahady, 17 May 2020 Taratasy sarobidy Mofomamy miraondraona Ny herin'ny vavaka Mahereza Tamin'ny voalohany;
Sabata, 16 May 2020 Afafazo ny tenin'Andriamanitra II Mpanjaka Divain'i Babylona Fanahy Masina sy ny asany Ireo fahamarinana voarakitra ao @ bokin'ny Genesisy;
Zoma, 15 May 2020 Manao fialàna Ny omby vavy Fanavotana tsara lamina Olana sasany mety hitranga Fomba fiteny, andalanteny ary tontolonkevitra, fianarana fanampiny;
Alakamisy, 14 May 2020 Aoka hampahery ny fihetsikao sy ny fiteninao Fomba telo hiadiana @ voalavo Fandravana an'i Jerosalema, fiz Atidoha, fiz NY BOKY SY NY HAFATRA ENTINY (Gen. :);
Alarobia, 13 May 2020 Ataovy ho voninahitr'Andriamanitra Solomona Tsy misy mafy tsy laitran'ny zoto Andalantsoratra Masina sy tontolonkevitra;
Talata, 12 May 2020 Aza mitsara mba tsy ho tsaraina Ny rano sy ny fisan'ny vatana Fitomboana arapanahy Fanomanana ny tanora hiatrika ny ho avy Ny famarimberenana sy ny ohapitenenana ary ny heviny;
Alatsinainy, 11 May 2020 Ampiasao ny fanomezampahasoavana nomeny Fanoratan'ny ny olona iray sy ny fiaimpiainany Nantsoina mba ho mpandresy hianao Teknika fambolena Petsay Fiz Ny tenin'Andriamanitra sy ny heviny;
Alahady, 10 May 2020 Izaho izay Izy hatrizay hatrizay Koba vomanga sy vov mangahazo maina Asandrato ny lohanareo Didier & Manoarisoa ( Andriamanitra no Mpiaro) Mahatakatra ny Baiboly ;
Sabata, 9 May 2020 NY zavatra rehetra dia ho azon'izay manampaharetana Babylona arapanahy, fiz Akaiky manahoana ny fiavin'i Kristy? Fomba fiteny, andalanteny ary tontolonkevitra;
Zoma, 8 May 2020 Taratasimpitiavana Ny angelikary Na izany aza matokia, fiz Dingana fito NY antony ilana ny fanazavana ny Baiboly; fianarana fanampiny;
Zoma, 26 Febroary 2021
Raha mifankatia isika, dia mitoetra ao @tsika Andriamanitra Ny herisetra, fiz Antso ho @ fitsaharana Nahoana no manambady ny vehivavy? Manompo sy mamonjy, fianrana fanampiny;